MOMBA ANAY - Shenzhen Alphagreen vape Co., Ltd.
Shenzhen Alphagreen vape Co., Ltd natsangana tamin'ny taona 2018 izay mpanamboatra manokana amin'ny fikarohana, fampandrosoana ary famokarana Vape Hardware. Any Shenzhen izahay, miaraka amin'ny fidirana fitaterana mety. Ny vokatray rehetra dia mifanaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena momba ny kalitao ary ankafizinay indrindra amin'ny tsena isan-karazany eran'izao tontolo izao.
Manana mpiasa 50 mahery izahay, tarehimarika amidy isan-taona izay mihoatra ny 24 tapitrisa USD. Ny fotodrafitrasa tsara fitaovana sy ny fifehezana kalitao tsara indrindra amin'ny dingana rehetra amin'ny famokarana dia ahafahanay manome antoka ny fahafaham-po ny mpanjifa.
Vokatry ny vokatra avo lenta sy ny serivisy ho an'ny mpanjifa miorina, dia nahazo tambajotram-barotra manerantany tonga tany Amerika Avaratra sy Eropa izahay.
Ekipa mavitrika, tanora ary be faniriana izahay.
Ny tanjonay dia ny "Think Big, Be Excellent." Mitroka hevitra vaovao, mifehy tsara ny kalitao, serivisy fanaraha-maso vokatra feno. Tianay ny manangana toe-javatra mandresy ary mamorona ho avy mamiratra
Izahay dia mandray ny mpanjifa rehetra amin'ny hafanam-po sy fahatsoram-po, mihevitra ny mpanjifa rehetra ho sakaizantsika mahafinaritra.
Izahay dia tapa-kevitra ny hampiasa akora manta avo lenta hanamboarana ny vokatray, cartridge 300k ary penina fanary 200k isam-bolana, dia mahazo valiny tsara avy amin'ny mpanjifa hatrany.
ANDRAHAO NY FITAOVANTSIKA
© Copyright - 2010-2021: Voatahiry ny Zo rehetra. Vokatra asongadina, Sitemap, cbd vape pen, penina vape bateria, penina vape azo, penina vape azo averina, vape menaka cbd azo ampiasaina, Bateria 510, Vokatra rehetra